कुलमान घिसिङ विरुद्ध लागे ओली निकट ‘लोडसेडिङ माफिया’, भन्छन्,‘कुलमानले डुबाए’ ! | Diyopost
कुलमान घिसिङ विरुद्ध लागे ओली निकट ‘लोडसेडिङ माफिया’, भन्छन्,‘कुलमानले डुबाए’ !
काठमाडौं, २२ कार्तिक । कुलमान घिसिङ उज्यालो अभियानका नायक हुन् । उनी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक (एमडि) बनेर आएसँगै राजधानीबासीले झेल्दै आएको लोडसेडिङ इतिहास बनिसकेको छ । तर, उनै घिसिङ विरुद्ध लोडसेडिङ गराउने ठूला माफिया व्यापारी भने कम्मर कसेर लागि परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निकट हुँ भन्दै हिँड्ने केयाल समुहका अध्यक्ष सत्य नारायण कयाल घिसिङ विरुद्ध सक्रिय छन् । घिसिङलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई कुरा लगाउने गरेको खुलेको छ ।
विहिबार प्रकाशित नागरिक दैनिकमा उनले घिसिङलाई खुल्ला आरोप नै लगाएका छन् । नारायणी रोलिङ मिलका सञ्चालक समेत रहेका कयालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको गलत रवैयाकै कारणले ठूला उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
‘घिसिङज्यूको गलत कार्यकै कारणले ठूला उद्योग डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘करौडौं रुपैयाँको बिल तिर्नुपरे उद्योगहरु धराशयी हुन्छन् ।’ उनले आफूले जनतालाई लोडसेडिङमा पारेर आफ्नो उद्योगमा बालेको करोडौं रकम तिर्नुपरेकाले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
‘लोडसेडिङको बेला डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको सुविधा लिएका उद्योगीबाट प्रिमियम शुल्क उठाउन लागेका हौं,’ उनले भनेका छन्, ‘सञ्चालक समिति बैठकले एकैपटकभन्दा पनि किस्ता किस्तामा बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको छ ।’
कयालले प्रधानमन्त्रीकै फोर्स लगाएर आफूले सञ्चालन गरेको उद्योगमा निकै कम बिलिङ गर्न लगाएको समेत स्रोतको दाबी छ । तर, कम विलिङको समेत पैसा तिर्न आनाकानी गर्दै घिसिङ विरुद्धै मिडियाबाजी गर्दै आएका छन् ।
केयालद्वारा सञ्चालित उद्योगहरुमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन मार्फत विजुली जोडिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्तो लाइन मार्फत जोडिएको विद्युतलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउने गरिएको छ ।
प्राधिकरणले जारी गरेको करिब १० अर्ब शुल्क तिर्न व्यावसायीहरुले आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको भएता पनि अदालतले व्यापारीको मुद्दा नै खारेज गरिसकेको छ ।
अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएसँगै प्राधिकरण ठूला माफिया व्यापारीबाट पाउनुपर्ने शुल्क उठाउन कस्सिएको छ ।